Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiverenan’ny Barea : Nomen’i Tinoka Roberto lamosina i Ntsay Christian
Fiverenan’ny Barea : Nomen’i Tinoka Roberto lamosina i Ntsay Christian
Ireny niarahan’ny rehetra nanaraka ny tolakandron’ny sabotsy ireny ny endriky ny fitsenan’ny vahoaka ny ekipam-pirenena Malagasy Barea, avy niaro ny voninahi-pirenena tany Ejipta. Voasokajin’ny vahoaka Malagasy ho “maherifon’ny firenena” ny Barea ka nomen’ny vahoaka ny voninahitra mendrika azy.
Teo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana kosa dia nahavariana ihany ny fihetsiky ny ministeran’ny fanatanjahantena sy ny tanora, teo ambany fitarihan’ny minisitra Tinoka Roberto. Noheveriny ho raharahan’ny ministera samirery ny fitsenana ny Barea tamin’iny sabotsy iny, ka nokasainy holalaovina hatao fitaovana maloto hanandratany tena. Tokony tsy hadinoina fa raha misy hetsika voasokajy ho raharaham-pirenena teto, satria niarahan’ny vahoaka manerana ny lafivalon’ny Nosy nientana, dia iny baolina kitra nahabe voninahitra an’i Madagasikara noho ny Barea iny. Efa tena raharahan’ny vahoaka Malagasy manerana ny Nosy mihitsy izy iny fa tsy an’ny mpitia baolina kitra irery intsony na an’ny mpiombom-po amin’ny fanatanjahantena, ary tsy an’ny tanora irery fotsiny intsony koa.
Noho izany, rehefa misy fanapahan-kevitra raisina amin’ny maha-raharaham-pirenena sy raharaham-bahoaka azy, dia ny fitondram-panjakana foibe izany no tokony ho tompo-marika amin’ny fanoritana ny fepetra hitantanana ny raharaha.
Tsy izany anefa no nataon’ny minisitry ny fanatanjahantena sy ny tanora, Tinoka Roberto, ny zoma alina teo fa nandray fanapahan-kevitra manokana izy, ho famaritana ny lalana hizoran’ny Barea miainga eny Ivatro, rehefa tafaverina an-tanindrazana ny sabotsy. Iny alin’ny zoma iny dia efa naparitaky ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin’ny haino aman-jery aman-gazety ilay fanapahan-kevitra ary iny alina iny ihany koa dia efa namoaka izany ny mpampalala vaovao.
Hanky va re, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian! Raharaham-pirenena goavana iny ka nahoana no tsy nifampierana ny famaritana ny lalana hizorana fa avy dia natao samirery tany ka naparitaka avy hatrany ?
Vao maraim-be ny sabotsy dia efa namory ny tompon’andraikitra tao anivon’ny governemanta ny Praiminisitra Ntsay Christian, ka io fivoriana io no namaritra ny lalana hizoran’ny Barea raha vao miainga eny Ivato.
Ny an-dry Tinoka Roberto dia hoe “miainga eny Ivato dia mandalo an’i Mandrosoa sy Talatamaty iny, mandalo an’Ambohibao, sy ny Digue, miazo an’iny Andohatapenaka sy 67 Ha iny, dia Ampefiloha ary Anosy.
Ny an’ny governemanta kosa dia mianga eny Ivato dia miazo ny lalam-baovao mivoaka eny Tsarasaotra, miazo an’Alarobia sy Ivandry, Ankorondrano sy Antanimena, Soarano, Analakely ary mipaka eny Mahamasina.
Dia ity fanapahan-kevitry ny governemanta ity no nandaminana ny raharaha fa nadaboka ny avy amin’ny ministeran’ny fanatanjahantena sy ny tanora. Dia ireny niarahan’ny rehetra nanaraka sy nahita ireny.
Ny tsy azo hamaivanina aloha dia tena nokasain-dry Tinoka Roberto nolalaoviny samirery ho voninahiny manokana iny fitsenana ny Barea iny ka nahatonga azy ho nanam-pahasahiana nanome lamosina mihitsy ny lehibeny, dia ny Praiminisitra Ntsay Christian”.
Taratr’ireny fihetsiky ny minisitra Tinoka Roberto ireny koa ilay fomba fitenin-dry zareo mpila anditra ao an-dapa ao hoe “hoy i Prezida…” Ny anaran’ny filohampirenena no arangarangan-dry zalahy rehefa te hampanjaka ny sitra-pony izy, na tsy nakany ny hevitr’i Andry Rajoelina akory aza. ENdrika ibaribarian’ny tsy fitokisan-teny koa izany.
Na izany na tsy izany, ireny fifanipahan’ny fepetra raisina amin’ny raharaham-pirenena goavana ireny no taratry ny tsy filaminam-pitantanana ny raharaham-panjakana ao ambony ao.